Rhinocort vs Flonase: मुख्य भिन्नता र समानताहरू - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय स्वास्थ्य औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, समाचार कम्पनी भारी खेल खेलहरु औषधि जानकारी कम्पनी, चेकआउट प्रेस चेकआउट औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी, औषधि जानकारी स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> Rhinocort vs Flonase: मुख्य भिन्नता र समानताहरू
Rhinocort vs Flonase: मुख्य भिन्नता र समानताहरू
राइनोकोर्ट (बुडेसोनाइड) र फ्लोनास (फ्लूटिकासोन) नाक स्प्रे औषधी हो जुन एलर्जिक राइनाइटिसबाट लक्षणहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। ती दुबै कोर्टीकोस्टेरोइड मानिन्छ जुन नाकको बाटोमा सूजन कम गरेर काम गर्दछ। एलर्जी औषधीको रूपमा, तिनीहरूले नाक र खुजलीको नाक जस्ता लक्षणहरूलाई कम गर्न सक्छन्। तिनीहरूको समानता र भिन्नताहरू यहाँ वर्णन गरिनेछ।
Rhinocort budesonide को ब्रान्ड नाम हो जुन काउन्टरमा जेनेरिक रूपमा पनि किन्न सकिन्छ। Rhinocort वयस्कहरू र years बर्ष वा माथिका बच्चाहरूमा नाक प्रशस्तता र खुजली जस्ता नाक लक्षणहरूको उपचार गर्न अनुमोदन गरिएको छ।
Rhinocort अनुनासिक स्प्रे बोतलको रूपमा उपलब्ध छ जुन प्रति स्प्रेमा mic२ माइक्रोग्राम बुडेसोनाइड आपूर्ति गर्दछ। यो सामान्यतया प्रति एक नाकमा प्रति स्प्रेको रूपमा गरिन्छ, प्रत्येक नाकमा प्रति चार स्प्रे को अधिकतम खुराकको साथ। Rhinocort बोतलें एलर्जी लक्षण को लागी १२० स्प्रे प्रदान गर्न सक्छ।
चिसो कति दिन सम्म रहन्छ?
एलर्जीका लक्षणहरूबाट पूर्ण राहत पाउन केही दिन लाग्न केही दिन लिन सक्दछ।
फ्लोनेज फ्लूटिकासोन प्रोपियनेटका लागि ब्रान्ड नाम हो। Rhinocort जस्तै, यो काउन्टरमा खरीद गर्न सकिन्छ। फ्लोनेजले ती वयस्कहरू र children बर्ष भन्दा माथिका बच्चाहरूमा एलर्जीका लक्षणहरूको उपचार गर्न सक्दछ। फ्लोनेज बुडेसोनाइड भन्दा times गुणा बढी सामर्थ्यवान छ।
फ्लोनेज नाक स्प्रेमा उपलब्ध छ जुन प्रति स्प्रेमा ut० माइक्रोग्राम फ्लुटीकासोन प्रदान गर्दछ। सामान्य खुराक लक्षणहरूको गंभीरतामा निर्भर गर्दै प्रत्येक नाकमा १ देखि २ स्प्रे हुन्छ। सिफारिश गरिएको अधिकतम खुराक प्रत्येक नाकको नाकमा २ स्प्रे हुन्छ।
कसरी छिटो तपाइँको रक्तचाप कम गर्न को लागी
एक कोर्टिकोस्टेरोइडको रूपमा, फ्लोनाजले १ देखि २ हप्ता लिन सक्दछ पूर्ण लक्षण राहतको लागि।
Rhinocort vs Flonase साइड साइड साइड साइड तुलना
Rhinocort र Flonase नाक स्प्रे औषधी हो कि समान लक्षणहरूको उपचार गर्दछ। यद्यपि तिनीहरू औषधीको एकै वर्गमा छन्, तिनीहरूमा केही भिन्नताहरू छन्। यी समानताहरू र भिन्नताहरू तल फेला पार्न सकिन्छ।
नाक जलिरहेको वा खुजली
हो, fluticasone प्रोपियनेट
30 १33 प्रति ,०, २ मिलीलीटर ०.० मीग्रा / २ एमएल ईन्सेलेसन निलम्बन।
M m$$ एमसीजी / इनह नाक स्प्रेको एक १ grams ग्राम बोतलको लागि
Rhinocort गर्भावस्था कोटि बी मा छ Rhinocort गर्भावस्था मा प्रयोग गर्न सकिन्छ यदि लाभ कुनै नकारात्मक प्रभाव पछाडि। Rhinocort प्रयोगको बारेमा गर्भवती वा स्तनपानको लागि एक चिकित्सकको परामर्श लिनुहोस्।
Flonase गर्भावस्था कोटि सी मा छ Teratogenic प्रभाव जनावरहरु मा रिपोर्ट गरिएको छ। कुनै अध्ययन मानव मा गरिएको छ। गर्भवती वा स्तनपान गर्दा Flonase प्रयोगको बारेमा एक चिकित्सकको परामर्श लिनुहोस्।
Rhinocort (budesonide) र Flonase (fluticasone) दुई corticosteroid औषधी हो जसले एलर्जीका लक्षणहरूको उपचार गर्न सक्छ। फ्लोनेज बुडेसोनाइड भन्दा बढी शक्तिशाली स्टेरोइड हो। यद्यपि ती दुबै सुजन कम गर्न र एलर्जीका लक्षणहरू जस्तै घुलमिल, खुजलीदार नाक र पानी आँखाहरूमा उपचार गर्न प्रभावकारी छन्।
के तपाइँ flonase र claritin सँगै लिन सक्नुहुन्छ
Rhinocort र Flonase दुबै बिना पर्चेको काउन्टरमा किन्न सकिन्छ। तिनीहरू समान खुराक फारमहरूमा आउँछन्। फ्लोनेजमा पुष्प गन्ध हुन सक्छ जुन धेरैलाई मनपर्दैन। यद्यपि यसले राइनकोर्ट भन्दा बढी एलर्जीका लक्षणहरू कम गर्न मद्दत गर्दछ।
Corticosteroids को रूप मा, दुबै औषधीहरूले कम्तिमा एक हप्ता लिन सक्दछ पूर्ण लक्षण राहत प्राप्त गर्न। केहि उल्लेखनीय साइड इफेक्टले दीर्घकालीन प्रयोगबाट नक्कलहरू समावेश गर्दछ। दुबै औषधिहरू दीर्घकालीन उपयोगको लागि सिफारिश गरिदैन किनभने प्रतिकूल प्रभावहरूको बढ्दो जोखिमको कारण।
दीर्घकालीन प्रयोगसँग सम्बन्धित केही प्रतिकूल प्रभावहरूमा संक्रमणको जोखिम, बिग्रिएको ग्लूकोमा, र घाउको कमजोर उपचार समावेश छ। केही बच्चाहरूले कम वृद्धि दरको अनुभव गर्न सक्दछ यदि तिनीहरूले लगातार आधारमा कोर्टिकोस्टेरोइडहरू प्रयोग गर्दैछन्।
यी औषधिहरू तपाईंको डाक्टरसँग छलफल गर्नुपर्दछ। Rhinocort र Flonase दुई मात्र औषधी हो जुन एलर्जीको उपचार गर्न सक्छ। तपाईंको लक्षणहरूको गम्भीरता र तपाईंको सम्पूर्ण प्राथमिकतामा भर पर्दै एलर्जी औषधीहरूलाई व्यक्तिगतकरण गर्न सकिन्छ।
यो Sudafed ले गर्दा मद्य पिउन सुरक्षित छ?
Levitra vs Viagra: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
बिहानको रोग को लागी काउन्टर मेड मा
साइनस संक्रमण को लागी zpack यो काम गर्दछ
कहिले सम्म xanax को प्रभाव हो
मेरो ग्लुकोज स्तर के हुनुपर्छ?
कहिले सम्म एन्टिबायोटिक लिने पछि मैले प्रोबायोटिक्स लिनु पर्छ
गर्भावस्था मा के दुखाई को औषधि लिन सक्नुहुन्छ
एक ह्या hang्गओभर को लागी गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो कुरा के हो